चालू आवमै बिमाको पहुँच २० प्रतिशतमा पुग्छ «
चालू आवमै बिमाको पहुँच २० प्रतिशतमा पुग्छ
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ६, २०७५ सोमबार
मनोजकुमार लाल कर्ण
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी
जीबन बिमा व्यवसायमा थप एक कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुगेको छ । कम्पनीहरू थपिएसँगै बिमाको पहुँच त वृद्धि भएको छ, तर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत सुरु भएको छ । कम्पनीहरूबीच कर्मचारी तथा अभिकर्ता तानातानको अवस्था भए पनि समितिले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीमा सामान्य तहमा काम गरेका कर्मचारी तथा अभिकर्तालाई नयाँ कम्पनीहरूले उच्च तह र सुविधा दिन थालेपछि पुराना कम्पनीहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । समितिले हालै मात्र अभिकर्तालाई विदेश भ्रमण गराउँदा, गाडीको सुविधा दिँदा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी पनि नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नियामक निकायको कडाइ गर्दा बिमा कम्पनीहरूलाई राम्रो भएको बताउँछन् युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्ण । बिमा बजार पूरै खाली भएको अवस्थामा कम्पनीहरू आक्रामक रूपमा बजार विस्तारमा लागेको र यसले प्रगतिसमेत भइरहेको उनको दाबी छ । कम्पनीहरूमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अभिकर्ता र कर्मचारीको समस्यालगायतका समग्र बिमा व्यवसायबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :
बिमा समितिले अभिकर्तालाई विदेश भ्रमण गराउने, कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिने विषयमा कडाइ गरेको छ । कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली पनि जारी गर्दैछ । बिमा कम्पनीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको हो ?
म सबै कुरालाई सकारात्मक ढंगले हेर्ने मान्छे । बिमा समितिबाट स्वीकृति लिएर विदेशमा तालिम दिनुपर्ने विषय राम्रो हो । यो आजको मात्र होइन, पहिलादेखि नै थियो । पहिले काठमाडौं उपत्यकामा समिति आफैंले तालिम दिन्थ्यो, बिमा कम्पनीहरूले उपत्यकाबाहिर मात्र तालिम दिन्थे । अहिले समितिले आफूले तालिम दिने भन्दा पनि समितिबाट स्वीकृति लिएर तालिम दिनुपर्छ भनेको राम्रो कुरा हो । एजेन्ट पनि बिमा समितिको नियमनअन्तर्गत पर्छ र उनीहरू पनि यसबारे अवगत हुनुपर्छ । गाडी सुविधाको विषयमा पनि राम्रो व्यवस्था ल्याएको हो । कहिलेकाहीं कसिलो नीति बनाउँदा बिमा कम्पनीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । समितिले दिनु हुन्न भनेको होइन । समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ मात्र हो । कर्मचारीहरूको हकमा नियमावली आउँदै छ, त्यो राम्रो कुरा हो । नीति–नियमको परिधिभित्र बसेर काम गर्नु झन् राम्रो कुरा हो । पहिलो बिमा ऐन नै राम्रो थिएन । यसमा सबै कुरा समेटेको थिएन । नभएका कुरा समावेश भइरहेको छ । कानुन आफैंमा पूर्ण हुदैँन, समय–परिस्थितिअनुसार परिमाजन हुँदै गएको छ । मैले जीवन बिमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखेको छैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यहाँ हुन्छ जहाँ बजार साँघुरो हुन्छ । तर, नेपालको जीवन बिमामा त बजार पूरै खाली छ । यहाँ कसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कुनै मानिसले धेरै रकम बराबरको बिमा गर्न सक्छ । तर, उसले एक कम्पनीमा त्यो पनि थोरै रकमको मात्र बिमा गरेको छ भने उसलाई अर्को कम्पनीको बिमा गर्न आग्रह गर्नु भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन । फिर्ता गराएर बिमा गर्ने भन्ने हुदैँन । कुनै पनि बिमा कम्पनीमा बिमा गरिसकेको छ भने त्यो कम्पनीको बिमा पोलिसी सरेन्डर गराएर बिमा गर्ने कम हुन्छन् । किनकि मानिसहरूले बुझेका हुन्छन् । तर, जति गर्न सक्छन् त्यो गरेका हुदैँनन्, त्यसैले थप बिमा गराउनुपर्छ ।
बिमा व्यवसायमा जुन हिसाबले जनताले अभिकर्ताहरूलाई महत्व दिनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले दिएको छैन । अभिकर्ता ग्राहकका लागि भगवान् हो । अभिकर्ता ग्राहकका लागि गएको हो, आफ्नो लागि मात्र होइन । अभिकर्ताले गरेको बिमाका कारण मानिसहरूको बुढेसकालमा घर चलेको छ । अभिकर्ताका कारण राजस्व समेत बढेको छ ।
पछिल्लो समयमा बिमा कम्पनीको संख्या र जनचेतना पनि बढेको छ । यसबीचको बिमाको वृद्धिदरलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हरेक पटक एउटा चरण हुन्छ । बिमा संस्थानले २०२९ सालदेखि जीवन बिमाको कारोबार गरेको छ । त्यसपछि अर्को कम्पनी आयो र बिमाको क्षेत्रमा केही काम ग-यो । जब २०५८ सालमा तीनवटा कम्पनी आए, पाँचवटा कम्पनी भएपछि केही हदसम्म प्रतिस्पर्धा भयो र केही रूपमा बिमाको विकास भयो । त्यस्तै २०६४ सालमा फेरि चारवटा इन्स्योरेन्स कम्पनी आए र वृद्धिदर बढी भयो । २०७४ सालमा नौवटा जीवन बिमा कम्पनी र २०७५ सालमा एउटा बिमा कम्पनी बजारमा आएपछि पुरानो र नयाँबीच थप प्रतिस्पर्धा भयो र दुवैले आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरे । अहिले बजारमा १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी जुन प्रकारले चल्नुपर्ने हो सोही प्रकारले चलिरहेका छन् । आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरेका छन् । अहिले १६ प्रतिशत बिमा बजार वृद्धि भएको छ । नयाँ आएर पुरानाको बिजनेस कम भएको छैन । ग्रामीण भेगमा पनि बिमा कम्पनीहरूले शाखा खोल्न थालेका छन्, जसले गर्दा बिमाबारे जनताले बुझ्न थालेका छन् ।
बैंकिङ पहुँच बराबर बिमाको बजार विस्तार हुन कति समय लाग्ला ?
जुन प्रकारले बिमा बजारको वृद्धि भइरहेको छ सोही प्रकारले जाने हो भने यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशतको हाराहारीमा बजार वृद्धि हुन्छ । यसैगरी बजारको विस्तार हुदैँ जाने हो भने बिमाको पहुँच छिट्टै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ ।
बिमाको बजार विस्तारका लागि बिमा साक्षरताका विषयहरू किन ओझेलमा परिरहेका छन् ?
बिमा साक्षरता कार्यकमलाई हेर्ने हो भने अनौपचारिक रूपमा धेरै अगाडि बढेको छ । पहिले शाखा कार्यालयहरू थिएनन् । सबै कम्पनी सहरकेन्द्रित थिए । तर, अहिले ग्रामीण भेगमा पनि शाखाहरू गइरहेका छन् । प्रत्येक महिना गाउँगाउँमा गएर कम्पनीहरूले ५० देखि १ सय जनासम्मलाई तालिम दिइरहेका हुन्छन् । यो बिमा साक्षारतासम्बन्धी ठूलो कार्यक्रम हो । हाम्रो कम्पनीमा मात्र अहिले १२ हजार अभिकर्ता छन् । उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई बिमासम्बन्धी जनचेतना जगाइरहेका छन् । अहिले बिमा बजारमा क्रान्ति भइरहेको छ । अनौपचारिक रूपमा बिमाको चेतना पनि बढिरहेको छ । यहाँ अभिकर्तामार्फत बिमाको व्यवसाय पनि विस्तार भइरहेको छ भने जनचेतना पनि फैलिरहेको छ ।
व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि बिमा कम्पनीले धेरै खर्च गर्न सक्दैनन् । जम्मा १८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन ।
बिमाको पहुँच बढेको तथ्यांक आए पनि बिमा पोलिसीमा केही दोहोरोपना पनि होला नि ?
अहिले बिमा कम्पनीहरू सहर बाहिर पनि गएका छन् । नयाँ ठाउँबाट बिमा पोलिसी आएको छ । त्यसैले अहिले बिमा पोलिसीको दोहोरोपना कम छ । नयाँ व्यक्तिहरूको बिमा आएको छ ।
बिमा बजारमा बढाउनका लागि अबको आवश्यकता के हो ?
कम्पनीहरूले कसरी अभिकर्ताहरूलाई परिचालन गरेको छ त्यसले निर्धारण गर्छ । अभिकर्तालाई कस्तो तालिम र कुन–कुन ठाउँमा तालिम दिनुभयो । तपाईं सहरमा बसेर मात्र तालिम दिनुभयो कि ? यसले बिमाको बजार विस्तार निर्धारण गर्छ । अब कम्पनीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर अभिकर्ताका लागि तालिम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुरमा तालिम दिएर मात्र बजारमा विस्तार हुँदैन । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि तालिम सञ्चालन गरेर अभिकर्ताहरू उत्पादन गर्नुपर्छ ।
अभिकर्ता बढाउने नाममा कम्पनीहरूले तालिम नै नदिई लाइसेन्स पनि दिन्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
प्रायःजसो यस्तो हुँदैन । हामी ४ तहको तालिम दिन्छौं । पहिला आधारभुत तालिम हुन्छ, त्यसपछि लाइसेन्स पाउँछ । त्यो तालिमबाट अभिकर्तालाई बिमा, बिमा योजनाका बारेमा जानकारी हुन्छ, तर बिमा गराउन सक्दैन । दोस्रो तहको तालिममा उच्च तहका ट्रेनरबाट तालिम दिन्छौं । त्यसपछि तेस्रो तहको तालिम हुन्छ । अन्तिममा चौथो चरणको तालिम हुन्छ । युनियन लाइफ इस्योरेन्समा हुने उच्च तहका तालिमहरू म आफैं पनि दिन्छु ।
कुनै अभिकर्तालाई कम्पनीले तालिम दिँदाखेरि कम्पनीको पनि खर्च हुन्छ । त्यसैले अभिकर्तालाई थोरै तालिम या तालिम नै नदिई बजारमा पठाऊ भन्ने त कम्पनीहरू पनि चाहँदैनन् । यसले कम्पनीलाई नै घाटा हुन्छ ।
शाखा प्रमुखलाई तपाईंहरूले अभिकर्ता बढाउन एउटा लक्ष्य दिइएको हुन्छ, त्यसबाट गलत काम हुन सक्छ नि त ?
शाखा प्रमुखहरूलाई हामी अभिकर्ता बनाउने मात्र टार्गेट दिँदैनौं । अभिकर्ताभन्दा पनि प्रिमियम संकलनको टार्गेट दिइएको हुन्छ । उसले त्यो लक्ष्यअनुसार प्रिमियम संकलन गर्नका लागि अभिकर्तालाई लक्ष्यअनुसार तालिम त दिनुपर्छ । राम्रोसँग तालिम दिएन भने प्रिमियम ल्याउन सक्दैन र उसलाई पनि घाटा हुन्छ । सबै कम्पनीले अभिकर्ताको संख्या बढाउन भन्दा प्रिमियम नै टार्गेट दिएका हुन्छन् । अभिकर्ता कस्तो किमिमको व्यक्तिलाई बनाउने, कस्तो तालिम दिने भनेर भनेको शाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको हुन्छ । हामीकहाँ अभिकर्ताका लागि उच्च तहको तालिम पनि हुन्छ । आधारभूत र दोस्रो तालिम जसलाई पनि दिन्छौं । त्यसपछि प्रिमियम संकलनका आधारमा समूह बनाएर उच्च तहको तालिम दिन्छौं । त्यसैले गलत व्यक्तिलाई तालिम नै नदिई लाइसेन्स बाँड्ने अर्थ रहँदैन ।
अब बिमा समितिको अगुवाइमा बिमा तालिम केन्द्रसमेत स्थापना भएको छ । यसले एड्भान्स लेभलका तालिमहरू सञ्चालन गर्छ । यसबाट अन्डरराइटिङ, क्लेमलगायतका क्षेत्रमा भोलिका दिनमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्छ ।
बैंक र इस्योरेन्स कम्पनीबीच ‘बैंकास्योरेन्स’ सम्झौता भइरहेको छ । नीतिबिना नै भएका सम्झौताले राम्रो प्रतिफल दिएको छ त ?
बिमा कम्पनी र बैंकहरूबीच कर्पोरेट एजेन्सीको सेवा सञ्चालनबारे सम्झौता भएको छ । बैंकका उद्देश्य, प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा बिमा कम्पनीको एजेन्सी भएर काम गर्ने भन्ने उद्देश्य भएको अवस्थामा यो सम्झौता भई काम अघि बढेको हो ।
यसले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ । अहिले हरेक व्यक्ति इस्योरेन्सप्रति जागरूक भएका छन् । पहिला–पहिला बैंकहरूले लगानी गर्दा धितो राख्ने, धितोको बिमा गर्ने र लगानी गर्ने गर्थे । बिमा भएको घर कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण भत्किँदा त बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति देला, तर जसले ऋण लिएको छ, ऊमाथि पूरै परिवार निर्भर छ, परिवारमा कमाउने व्यक्ति पनि उही हो, यो अवस्थामा उसको मृत्यु भएमा बैंकको ऋण कसले तिर्ने ? बैंकले त घर लिलामी गरेर उठाउला, त्यसपछि घरपरिवारको अवस्था के होला ? त्यसैले गर्दा ऋण लगानी गर्दा ऋणीको पनि बिमा गर्नु राम्रो हो । भोलिका दिनमा ऋणीको अवस्था केही भइहालेमा पनि ऋणका कारण घरपरिवारलाई समस्या नहोस् भनेर बैंकहरूले ऋणीको बिमा गरिरहेका छन् । यदि कुनै समस्या नभएको अवस्थामा पनि १५-२० वर्ष बैंकको ऋण तिर्दा–तिर्दा थलिएको व्यक्तिलाई बिमाको भुक्तानी पाउँदा जीवन सहज हुन्छ । अहिले पूरै खाली भएको बिमा बजारमा विस्तारका लागि जसले काम गरे पनि सहयोग नै पुग्ने हो ।
बिमा गराउने समयमा अनेक प्रलोभन देखाउने र दाबी भुक्तानीमा किचलो झिक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ नि ?
दाबी भुक्तानीमा धेरै सुधार आएको छ । अझ जीवन बिमा कम्पनीको दाबी भुक्तानीमा त समस्या छैन । पोलिसी पूर्ण भएपछि या पोलिसी अवधिभित्र केही भइहाल्यो भने दाबी भुक्तानी दिने हो । मानिसको मृत्यु भएपछि भइहाल्यो, त्यसमा कति पैसा दिने भन्ने सवाल नै रहँदैन । यहाँ मृत्यु भएपछि पूर्ण मृत्यु हो, पूर्ण पैसा पाउँछ । पोलिसी पूर्ण भएको छ भने जतिको बिमा गरेको हो त्यसमा बोनस जोडेर पाउँछ ।
कहिलेकाहीँ कम्पनी र बिमितबीच समस्या आउँछ । जस्तो बिमितको एउटा किड्नी फेल भएको छ, तर बिमा गर्ने बेलामा म स्वस्थ छु भनेर भनेको छ भने त्यस्तो बिमाको दाबी भुक्तानी दिँदैन । यसमा कम्पनीको गल्ती होइन । सम्बन्धित व्यक्तिले बिमा गर्ने बेला सबै कुरा स्पष्ट भन्नुपर्छ । सबै कुरा स्पष्ट भनेपछि बरु कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम थप गरेर त्यस्ता व्यक्तिको बिमा गर्न सक्छन् ।
बिमा गर्ने बेलामा अभिकर्ता या एजेन्टले सबै कुरा त बुझाउँदैन नि ?
हरेक बिमा पोलिसीका पछाडि सेवा–सर्तहरू सबै खुलाएको हुन्छ । बिमा गर्ने ग्राहकले पनि यसबारे बुझ्नुप-यो, पढ्नुप-यो । म जमिन किन्दा रजिस्ट्रेसन फर्ममा कति लेखेको छ, पढ्छु कि पढ्दिनँ ? एक रोपनी भनेर किनेको जग्गा रजिस्टे«सनमा ८ आना मात्र छ भने पनि व्यक्तिले किन्छ भने त गल्ती उसैको हो नि । बिमा पोलिसी किन्दा अभिकर्ताले पनि सबै कुरा भन्नुपर्छ र बिमितले पनि सबै कुरा बताउनुपर्छ । अहिले यस्ता समस्या छैनन् । अभिकर्ताले सबै कुरा बताइरहेका छन् ।
अभिकर्तालाई जसरी भए पनि पोलिसी बेच्न प्रोलभन दिने भएकाले झुक्याएर बिमा गरिन्छ नि त ?
यस्तो गरेको छैन । झुक्याएर कसैले पोलिसी बेचेको छ भने त्यो इस्योरेन्स कम्पनीलाई घाटा छ । झुक्याएर बेचेको पोलिसी त बीचैमा फिर्ता हुने भएकाले बिमा कम्पनीलाई त घाटा हुने भयो नि ! अभिकर्तालाई पनि घाटा हुने भयो । ग्राहकलाई पनि सरेन्डर गर्दा घाटा हुन्छ । यसमा सबैलाई घाटा भएपछि झुक्याएर किन बिमा गर्ने ?
युनियन लाइफ इस्योरेन्स सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो । यो अधिमा कम्पनीको प्रगति कस्तो छ ?
यस अवधिमा हामीले धेरै राम्रो प्रगति गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा ९ महिनाजति काम गरेका थियौं । उक्त अवधिमा ८६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन ग-यौं । यसपालि दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा १ अर्ब ६ करोड प्रिमियम ल्याएको छौं । १ सय २० वटा शाखा र १२ हजार अभिकर्ता भएका छन् । हामीसँग दक्ष र व्यावसायिक समूह छ । सन्तोषजनक रूपमा शाखा विस्तार गरिरहेका छौं ।